हाम्रोबारे | यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन शरणार्थीका लागि निःशुल्क वेबसाइट | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
को RCO के हो?
मिशन, दृष्टि, र मान्यताहरु
यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका मा शरणार्थी र आप्रवासी लागि सिर्जना वेबसाइट.
यो एक-स्टप छ, को साधनहरु र जानकारी newcomers सबै घरहरुमा कि व्यापक वेबसाइट अमेरिका मा यहाँ सफल जीवन आफू र आफ्नो परिवारको लागि निर्माण गर्न आवश्यक.
सामग्री resettled शरणार्थी र आप्रवासी द्वारा संगठित गरिएको छ र ESL दर्शकहरूलाई र सीमित औपचारिक educations भएकाहरूले लागि लेखिएको छ. कार्यक्रममा थप दुवै स्वचालित र मार्गदर्शन अनुवाद र बहु-सर्वसाधारण सिक्ने प्रविधी नवीनतम द्वारा उन्नत छन्. हामी सहायता प्रदान गर्न मोबाइल प्रविधिको को proliferation र इन्टरनेट शक्ति प्रयोग कहाँ र कहिले यो आवश्यक छ.
को RCO अद्वितीय छ.
यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका मा शरणार्थी र आप्रवासी लागि मात्र व्यापक अनलाइन स्रोत छ. हामी हरेक राज्य मा newcomers प्रयोग र देश भर resettlement एजेन्सीहरू र अन्य गैर-लाभ संग भागीदारी गर्दै छन्. हाम्रो काम तिनीहरूलाई आवश्यक गर्नेहरूलाई तिनीहरूलाई थप बोधगम्य र पहुँचयोग्य गरेर पहिले नै अवस्थित छ कि समर्थन को अन-द-जमीन स्रोतहरू complements.
को RCO यो सेवा जनसंख्याको द्वारा निर्देशित छ.
यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन intimately यसलाई मद्दत गर्न प्रयास छ समुदायसँग परस्पर छ. थप हाम्रो बोर्ड सदस्यहरूको आधा भन्दा संयुक्त राज्य अमेरिका मा सफलतापूर्वक resettled गरेका शरणार्थी र आप्रवासी छन्. हाम्रो कार्यक्रम विकसित गरियो र निरन्तर नव आगन्तुक समुदाय इनपुट को एक iterative प्रक्रिया मार्फत सुधार गर्दै, को RCO गरेको शरणार्थी प्रौद्योगिकी र सल्लाहकार परिषद सहित. लिएको हरेक कार्य newcomers आफ्नै सर्वश्रेष्ठ समर्थकले हुन् भनेर विश्वास मा premised छ.
को RCO आर्थिक कुशल छ.
यस शरणार्थी केन्द्र अनलाइन को कार्यक्रम रहँदा छन् प्रभावकारी खर्च. हामी शक्ति प्रयोग र इन्टरनेट को पुग्न, हाते प्रविधिको को proliferation संग संयुक्त, कार्यक्रम हो कता मापनयोग्य छन् सिर्जना गर्न. हाम्रो लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका मा शरणार्थी लाखौं र आप्रवासी मदत गर्न र जसबाट हाम्रो समुदाय बलियो छ, हाम्रो अर्थव्यवस्था, र हाम्रो लोकतन्त्र.
सिक्न कसरी तपाईं तपाईंको समुदाय मा शरणार्थी स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ
हाम्रो काम समर्थन